Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Xuquuqul Insaaka Itoobiya oo Xaalada Gobolka Axmaarada Kahadlay.
Ururka Xuquuqul Insaaka Itoobiya oo Xaalada Gobolka Axmaarada Kahadlay.
Ururka xuquuqul insaaka ee Itoobiya ayaa warbixin dheer oo ay soosaareen kusheegay in Gobolka Axmaarada ee woqooyiga Itoobiya ay sanadihii lasoo dhaafay kadhaceen xadgudubyo aad u waawayn iyo waliba xasuuq shacab oo si ula kac ah loogaystay.
Sida warbixinta ururka lagu sheegay ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa 3dii sano ee lasoodhaafay dhibaatooyin ugaystay shacabka kudhaqan Gobolka Axmaarada, halkaas oo kacdoono maamulka Gumaysiga lagu diidanaa ay kajireen.
Ururka xuquuqul insaanka Itoobiya ayaa sheegay in boqolaal shacab ah ay ciidanka Itoobiya kudileen Gobolka Axmaarada iyagoo amar buuxa kahaystay maamulkii wayaanaha ee talada laga faro maroojiyay, wuxuuna ururku intaas kudaray in dad kale oo shacab ah laga buuxiyay xabsiyada kuyaalada Gobolka Axmaarada kuwaas oo aan helin wax cadaalad ah.
Ururka xuquuqul insaanka Itoobiya ayaa kutalo bixiyay in lasameeyo baadhitaan dhab ah oo ku aadan dhibaatadii kadhacday Gobolka Axmaarada, wuxuuna ururku kubaaqay in cadaalada lahorkeeno dadkii kadambeeyay dhibaatada shacabka Axmaarada lagu sameeyay.
Wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa ah wadan aan tixgalinin xuquuqul insaanka waxaana wadanka daafihiisa kadhaca tacadiyo aad ubadan oo ay gaysanayaan ciidanka mulatariga Itoobiya iyo maleeshiyaadka loosameeyay in ay shacabka xasuuqaan.
Hay’adaha xuquuqul insaanka udooda gaar ahaan Human Right Warch ayaa in badan kahadashay xaaladaha xuquuqul insaanka ee wadanka Ogadenia, mana jiro cid dhag jalaq usiisay, waxaana lawada ogyahay in dadka shacabka ah ee Soomaalida Ogadenia loogaystay xasuuqyo aad uba’an.